Phacelia ho toy ny siderat: rehefa sy ny fomba famafazana, ahoana no tokony hampiharina - Famokarana voankazo - 2019
Ahoana ny fampiasana phacelia ho siderata
Araka ny antontan'isa, ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana fambolena dia efa nandroso tsikelikely tao anatin'izay folo taona lasa izay. Misy karazana zavamaniry vaovao, fitaovam-pambolena faran'izay avo kokoa, ary koa fomba vaovao fanodinana sy fanafody. Ity fanavaozana ity dia natokana ho an'ny zava-manan'oliva bitika, toy ny phacelia: karazana siderat, ahoana ny fampiharana azy tsara, inona no mampiavaka ny fambolena an'arivony - andao hijery akaiky kokoa.
Phacelia ho siderat: tombony sy tsy fahampiana
Fa izay vokatra dia tsara kokoa ny mampiasa
Karazana fambolena fambolena
Rahoviana vao hamboly
Ahoana no hamafazana
Ahoana ny fikarakarana
Rahoviana ny manopy maitso
Inona no lanjan'ny sideratov?
Mba hahatakarana tanteraka ny lanjany sy ny tombontsoa avy amin'ny sidera, dia tsy maintsy dinihina aloha ny mety ho fisehoan-javatra. Ny dite maitso dia ireo vokatra maitso izay nafafy talohan'ny nanamboarana ny vokatra fototra. Natao izany mba hanatsarana ny tany miaraka amin'ny singa ilaina. Tsy misy tsiambaratelo fa ny vokatra lehibe dia mampihena ny tany, mampihena ny habetsaky ny sakafo ao aminy, ary mety hampihena ny vokatra amin'ny ho avy. Noho izany, ny tany dia tsy mamoy ny fananany ary manana singa manan-danja, ary ampiasaina ny sidera - manatsara ny haavo tsara indrindra ary manatsara ny rafitra sy ny rafitry ny tany.
Ny sandan'ny zavamaniry toy izany dia:
Fikojakojana sy fiorenana mangatsiaka - afaka mamafy izy ireo amin'ny fiandohan'ny lohataona sy faramparan'ny fararano;
Amboaram-pahalavorariana avo lenta - ny sandan'ny sidera indraindray dia mihoatra ny diky na ny hume;
fampihenana ny asidrain'ny tany;
katalana amin'ny fizotry ny mikrôbiolojika amin'ny tany;
fiarovana ny vokatra avy amin'ny bibikely sy bibikely sasany;
ny fitsaboana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny tany.
Ny siderats dia ahitana zavamaniry toy ny hainkazo, lupins, rogia, voanio fotsy, fatseliya ary ny hafa. Noho ny fambolena ireo vokatra ireo, ny fotoan'ny fambolena dia tsy mifamatotra amin'ny volana iray voafaritra tsara - ireo zavamaniry ireo dia mandefitra tsara ny hafanana ambany. Na dia izany aza, tsy ireo rehetra ireo dia mitovy amin'ny natiora: ny sasany dia natao mba hamafazana voa kely alohan'ny hitsarana azy.
Zava-dehibe izany! Phacelia dia fianakaviana mifangaro rano - tsy misy analoga amin'ny zavamaniry hafa nambolena tao an-jaridaina legioma. Noho izany, tsy mitovy amin'ny sideratov hafa izy io, azo alaina mialoha sy aorian'ny fambolena rehetra.
Ity kolontsaina ity dia an'ny fianakaviana buravchikovuyu. Azo antsoina hoe fitaovana manerantany ho an'ny harena an-kibon'ny tany izany - alohan'ny aorian'io dia afaka mamafy ny zavamaniry sy ny vokatra. Maro ireo zaridaina no miantso azy io ho vokatra tsara - noho ny volombava tsara toetra. Anisan'izany ireto:
Toetrandro fitoviana - fanatsarana ny tany. Noho ny maha-tokana azy sy ny tsy fitoviana amin'ny kolontsaina hafa, phacelia dia afaka mamoaka bibikely isan-karazany - amin'ny fanintonana entomôophages izay manimba ny parasy. Ny zavamaniry dia afaka manala ny zavamaniry amin'ny valala, ny papango, tsvetoeda ary ny nematodes. Ankoatr'izay, ny vokatra fanasitranana dia tratra amin'ny fisorohana ny rotaka, ny fanamainana mafy ny voankazo sy ny zavamaniry (noho izany, phacelia dia matetika ampiasaina ho fanafody ho an'ny ovy).
Manintona ny tantely - Phacelia dia zavamaniry tantely miavaka. Ny voninkazo lehibe amin'ny zavamaniry dia maniry herinandro 5 aorian'ny fambolena sy fambolena isaky ny 2 andro. Ny fofona sy ny fofona voninkazo dia manintona tantely maro, bibikely - noho izany, ity zavamaniry ity koa dia tena ilaina tokoa ho an'ny mpiompy.
Fitomboan'ny tany. Tsy dia mendri-piderana loatra i Phacelia ka afaka mitombo izy na dia any amin'ny tany matevina, na amin'ny tanimanga, na ao anaty rano na ho maina. Noho izany, amin'ny fambolena zezika maitso, dia afaka mahazo vokatra amin'ny tany mahantra sy mahafa-po indrindra ianao. Na izany aza, raha mahantra be ny tany - mety tsy ho ampy ny fambolena maitso. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mamafy phacelia mandritra ny vanim-potoana.
Famafàna entana. Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny asidra be loatra ny tany, dia mahatonga azy ireo tsy mety amin'ny tsimparifary izay mifanaraka amin'ny tontolo iainana - ohatra, hazo lefona.
Endrika mahafinaritra - io "fofona" io dia azo jerena eo am-pandriana.
Fanangonana haingana sy kolontsaina - Ny zavamaniry dia hahatratra ny fitomboana feno (hatramin'ny 30 cm) ao anatin'ny iray volana. Amin'ny herinandro 4, ny lanjan'ny phacelia dia afaka mahatratra 300 kilao isaky ny ha 1 - izany dia mitovy amin'ny dite 300 kg.
Frost resistance. Mandray ny hafanana, hain-tany mafy, rivotra, tsy misy masoandro.
Fahaleovan-tena - raha toa ka tsy voakilasy amin'ny fahamatorana feno ny voany ilay zavamaniry.
Amin'ny ankapobeny, tsy misy hadisoana mazava ao anaty dite maitso. Na izany aza, misy ny mpikaroka sasany kolontsaina ratsy:
Ity dia famolavolana fanao isan-taona - hanatsara ny tany, mila manangom-bokatra isan-taona ny dite maitso ary indraindray imbetsaka;
ny ilàna ny manapaka dite maitso alohan'ny hanamboarana ny vokatra fototra.
Na izany aza, na eo aza ny fahadisoana madinidinika toy izany, dia mbola mijanona ho iray amin'ireo malaza indrindra sy malaza indrindra amin'ny fambolena maoderina i phacelia.
Fantatrao ve? Avy any Amerika i Phacelia. Ny anarany dia nadika avy amin'ny teny grika hoe "bundle".
Ireo toetra tena tsara ao amin'io zavamaniry io dia midika fa ny fampiasana azy ho siderata amin'ny vokatra rehetra. Ho an'ny legioma dia ampiasaina ho fanatsarana ny fanatsarana izany - ny legumes dia mamiratra vao tara, ary i Phacelia dia manintona bibikely maro miaraka amin'ny fofomamy manitra amin'ny voniny.
Ho an'ny ovy, karaoty, ravina ary zavamaniry hafa izay voan'ny voany ao anaty tany, ity voa ity dia mpiaro tsy azo ianteherana amin'ny parasy izay manimba ny fambolena. Ho an'ny vokatra hafa rehetra, ny toetra voajanahary maitso dia ahafahana manatsotra ny tany sy mampitombo ny fiteran'ny zavamaniry, ary hiarovana azy ireo amin'ny bibikely sy aretina isan-karazany.
Ny fitomboan'ny phacelia amin'ny siderata dia tsy mitaky fotoana be loatra na fitaovana manokana. Na dia izany aza, misy soso-kevitra vitsivitsy izay hilaza aminao ny fomba hamafazana ity kolontsaina ity marina.
Toy ny sideratov koa nampiasa zavamaniry toy ny lupine, alfalfa, buckwheat.
Matetika, phacelia no mamboly 2 isan-taona - amin'ny fiandohan'ny lohataona sy ny fararano, aorian'ny fijinjana. Noho ny famongorana mafy ny tany, dia avo efatra heny ny habetsaky ny fandoroana. Ny famolavolana lohataona dia ampiasaina hanatsarana ny tany alohan'ny handraisana ny vokatra amin'izao fotoana izao, fa ny fambolena amin'ny lohataona dia hisoroka ny fanamainana na ny mangatsiaka loatra ny tany amin'ny ririnina.
Amin'ny volana martsa, ity siderat ity dia nambolena rehefa nidina ny lanezy voalohany, na dia ambany ny mari-pahaizana ambany ny 0 ° C. Io fako io dia mitombo sy matotra haingana indrindra - noho izany dia atambatra eo amin'ny 2 herinandro mialoha ny voa namboly fototra.
Mba hisarihana ny mpangalatra biriky, ny siderat dia afafy amin'ny faran'ny lohataona na amin'ny fiandohan'ny fahavaratra. Amin'ity tranga ity, dia nambolena teo anelanelan'ny fandriana misy ny zavamaniry mainty. Rehefa mamolavola siderat amin'ny fahalavoana dia manapa-kevitra ny mpamboly tsirairay. Afaka hamboly avy hatrany i Phacelia aorian'ny fijinjana (amin'ny tapaky ny fararano), ary aorian'ny fambolena zaridaina legioma. Ny zavatra manan-danja indrindra - dia ny hanana fotoana hizarana ny kolontsaina alohan'ny lanezy.
Zava-dehibe izany! Rehefa avy naraikitra ny ovy dia tsy maintsy afafody avy hatrany - raha tsy izany dia ho lasa mahantra ny tany ary azo sintonina.
Rehefa manangona zavamaniry dia misy fitsipika sasantsasany:
Ny tahan'ny famolavolana dia mihoatra ny 200 g isaky ny 1 hektara ny zaridaina legioma.
Tsy tokony ho maina ny tany, raha hain-tany henjana dia tsara kokoa ny manondraka ny tany (raha mipoitra ny fahavaratra amin'ny fahavaratra, ary amin'ny lohataona sy ny fararano dia tsy ilaina ny rano).
Ny famadihana alohan'ny famafazana dia tsy ilaina - na izany aza, ilaina amin'ny famerenana kely ny tany.
Ny famokarana dia mila atsipika ao anaty tany roa santimetatra - amin'ny rivotra mahery, ny voany kely amin'ny voly dia mety hipoaka fotsiny ilay tranokala.
Mangatsiaka be dia be i Phacelia, ka tsy voatery hisakafo na fanodinana hafa ny voa. Azonao atao ny mitahiry ireo voanio phacelia ho an'ny ho avy. Noho izany, ny voankazo dia nambolena tao amin'ny faritra iray, lavitra ny zaridaina (mba tsy hipetrahan'ny voa ny fandriana ary tsy mifangaro amin'ny masomboly hafa). Dia mila miandry ny fahatsapana feno ny siderata - manodidina ny 6-7 herinandro aorian'ilay fitsangantsanganana. Taorian'ny phacelia ottsvetet, dia tapaka sy maina ny stalks. Ny siderat dia nohosorana tsara ary voa azo.
Fantatrao ve? Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 75 ny karazana phacelia ho kolontsaina - na izany aza, dia ny karazany 3 ihany no ampiasaina: ny felam-bolo, ny fery ary ny pizhmolistny.
Ny lanja iray hafa amin'ny kolontsaina toy izany dia unpretentiousness. Ny orinasa dia tsy mitaky fikarakarana manokana - tsy mila rano manokana na voaro amin'ny rivotra. Rehefa afaka 3 herinandro, dia azo ambolena ao amin'ny saha ny voany. Ny zavamaniry toy ny strawberries, doka, homamiadana, voatabia, dia nambolena teo anelanelan'ny sideratom. Amin'izany fomba izany, ny phacelia dia hiaro ny zavamaniry matevina sy marefo avy amin'ny rivotra, hafanana, na ranoka. Na izany aza, alohan'ny hanamboarana sotrokely, tongolobe, seleria (ireo zavamaniry izay mihintsana ny voa ao anaty tany) dia tsy maintsy ariana ilay zavamaniry.
Rehefa hanadio ny fahatsiarovana dia miankina amin'ny inona no tanjon'ny tany. Raha nambolena ny phacelia mba hisarihana ny tantely, dia tokony hosoloina ary hamafy indray izy rehefa mamony. Rehefa nafafy tamin'ny faran'ny fahavaratra - hatramin'ny fiandohan'ny fararano (mba hamerenana sy hanatsarana ny tany), dia tapaka ny phacelia alohan'ny fambolena ririnina. Ny fambolena phacelia amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia midika ho ny fiakarany am-piandohana amin'ny lohataona - amin'ity tranga ity dia tapahina mialoha ny famafazana mivantana ny vokatra fototra. Ny lohataona lohataona ny siderata dia tsy azo fongana tanteraka, ary mamela tsikelikely - hiaro ireo vokatra hafanana be loatra amin'ny fandroahana.
Mba hampitomboana ny sehatra avo indrindra amin'ny tany, dia hajanona eo amin'ny ambaratonga feno fanangonam-borona ny volkano maitso - io karazana fandrakofana io dia hanatsara sy hamela ny tany alohan'ny hanamboarana tongolo lay na tongolo.
Ny fahafaha-manatsara sy ny lanjan'ny phacelia amin'ny siderata dia manome fahafahana ny tsy hampiakatra intsony ny dipoavatra na mineraly amin'ny tany - raha nambolena 3-4 isan-taona, dia ho antoka tsara tokoa ny hahazoana vokatra be dia be sy ny fanangonam-boa tsara indrindra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ahoana ny fampiasana phacelia ho siderata